I-Agastya 1BR - AYINGAmagciwane NGAPHAMBI KOKUHLALA KONKE
U-Ankita unokuphawula okungu-1068 kwezinye izindawo.
U-Badami mhlawumbe angachazwa njengomzala ka-Hampi opholile. Inikeza ukufinyelela okulula ngokulinganayo kuzo zonke izindawo ezikhanga izivakashi, kodwa kusukela endaweni enokuthula yasekhaya.
I-Agastya Villa iyikhaya elithokomele futhi elinethezekile e-Badami elinokuhlobisa okuxakile kanye nombono omuhle wentaba. Iziphuzo endaweni yokuphumula ye-terrace, ukudla kwasekhaya, uhambo nohambo oluyigugu eduze nendawo - lokhu okunye okuhlangenwe nakho izivakashi ezikhuluma kakhulu ngakho, uma zihlala lapha.
Siyajabula ukukhombisa izivakashi zethu eduze, futhi sisize ngamaphakheji okuvakasha!
I-Agastya Villa ikhethekile ngenxa yayo
- Ingaphakathi elimnandi
- Umbono omuhle wezintaba
- Ibha yeTerrace
- Ukusekela ngokuhlela imisebenzi yezivakashi endaweni yonke
Sikhathalela induduzo yakho ngokuphelele! Kulokho, sinikeza
- I-AC, i-WiFi
- Insimbi, ithoshi
- Amagiza, amathawula
- Ikhithi yezokwelapha, okokuxosha omiyane
- Izitsha ezihlukene zokudla okumsulwa kwemifino
- Indawo yokupaka evikelekile yezimoto ezingafika kwezi-2
Ngezindleko ezengeziwe, singanikeza
- Konke ukudla
- Kukhona igumbi lokulala elingu-1.
- Ikamelo lisekelwe esitezi sokuqala.
- I-AC negumbi lokugezela elinamathiselwe kuhlinzekwa egunjini.
- Igumbi linombhede olingana nenkosi.
- Igumbi linikeza ukubuka kwengadi.
- Kunendawo yokubeka imithwalo ekamelweni ngalinye.
- Kunegumbi lokugezela elingu-1 futhi linamathiselwe.
- Igumbi lokugezela linegiza nethawula.
- Igumbi lokuphumula line-TV futhi lihlala abantu abangu-7 ngokukhululeka.
- Iphinde ibe nombhede kasofa.
- Indawo yokudlela ihlalisa abantu abangu-4.
- Kukhona ibha kuthala.
- Ikhishi lifakwe isitofu segesi, isisefo samanzi, i-toaster, isiqandisi kanye ne-microwave.
- Izitsha nokusika kuyatholakala.
- Ikhishi labelwe izivakashi.
- Izivakashi zingasebenzisa ikhishi ukulungisa ukudla kwemifino.
- Izivakashi zingafinyelela ekhishini esitezi sokuqala kuphela.
Lo mbungazi unokushiwo abanye okungu-1,068 kwezinye izindawo zokuhlala. Veza okunye okushiwo abanye
I-Badami, phambilini eyayaziwa ngokuthi i-Vatapi, izungezwe yi-Agastya Lake futhi itholakala esigodini setshe lesanti elibomvu. Yaziwa kakhulu ngamathempeli ayo emhume we-sandstone aklanywe kahle, izinqaba nemifanekiso eqoshiwe. Ngakho-ke ngenkathi ujabulela ukuhlala kwakho okunokuthula e-Agastya Villa, nazi izindawo ezimbalwa eziseduze nemisebenzi esiyincomayo ukwenza ukuhlala kwakho kukhumbuleke nakakhulu.
- Yamukela ubuhle bamathempeli emigede.
- Chitha isikhathi sokuthula eduze ne-Agastya Lake.
- Vakashela amathempeli aseBhuthanatha.
- Thola amazwibela emlandweni e-Badami Fort.
Umsingathi akekho endaweni kodwa uhlala efinyeleleka ngekholi noma ngomlayezo. Umnakekeli oqeqeshiwe nonesibopho ukhona endaweni ukuze axazulule noma yikuphi ukukhathazeka futhi akusize ube nokuhlala kahle.